﻿ दशैंको टिका : राष्ट्रपतिसँग लगाउने कि पुर्वराजाबाट ?
दशैंको टिका : राष्ट्रपतिसँग लगाउने कि पुर्वराजाबाट ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दुवैले फरक फरक स्थानमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने भएका छन् । बडा दशैंको अवसरमा विजयादशमीमा टीका लगाउन जाने कसैलाई अनिवार्य गरिएको छैन । तरपनि विशिष्ट व्यक्तिहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट टीका लगाउन जाने सम्भावना छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सर्वसाधारणलाई अपरान्ह चार बजे टीका लगाइदिने भएका छन् ।
सर्वसाधारणलाई निर्मल निवासमा टीका लगाइदिने गरी समय तय भइसकेको छ । राजसंस्थाको अन्त भएपछि पनि पूर्व राजाले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने गरेका छन् । विशेषगरी राजसंस्थाका पक्षधरहरु टीका लगाउन पूर्व राजा कहाँ पुग्ने गरेका छन् ।